Niciima Qorane oo Xukun Adag lagu riday Hargeysa!
Sunday April 15, 2018 - 11:55:13 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Maxkamada gobolka Maroodijeex ee Somaliland ayaa xukun saddex sano ah ku ridey Abwaan Naciima Axmed Qorane.
Ciidamada Booliiska Somaliland ayaa Naciima Qorane ka xiray Magaalada Hargeysa kadib markii ay kusoo eedeeyeen inay faafinayso mabda’a Soomaaliweyn.
Qareenada u doodayay Naciima Qorane ayaa sheegay in dacwadaha lagu soo oogay ay ahaayeen ceebeyn qaranimada Somaliland ah iyo sidoo kale firkado ay ku qortay baraha bulshada, qoraaladaasi ayaa lagu sheegay inay ku taageertay Soomaaliweyn.
Abwaan Niciima Qorane waxaa ay ku nooleyd sanadihii u dambeeyay Magaalada Muqdisho kadib markii ay kasoo guurtay Somaliland.
Hadalkaasi kadib kuma noqon Somaliland iyadoo ka cabsi qabtay in la xidho, balse markii xukuumadda cusub ee Somaliland timid ayay tagtay Hargeysa si ay usoo booqato qoyskeeda oo magaalada ku nool.